यसकारणले गर्दा पनि यी कुराहरु विवाहपछि पनि परिवर्तन हुँदैन – List Khabar
Home / जीवनशैली / यसकारणले गर्दा पनि यी कुराहरु विवाहपछि पनि परिवर्तन हुँदैन
यसकारणले गर्दा पनि यी कुराहरु विवाहपछि पनि परिवर्तन हुँदैन
admin3weeks ago जीवनशैली Leaveacomment 31 Views
हुन त दशैंको मौसम छ । यही मेसोमा कतिपय नयाँ ससुराली जाँदैछन् । कतिले हालसालै विवाह गरेका छन् । विवाह गरेपछि दुई फरक पृष्टभूमीका युवा र युवती आपसमा ‘दम्पती’ हुन्छन् । जब दाम्पत्य जीवन सुरु हुन्छ, तब पहिलेको जस्तो मनोमानी चल्दैन । सम्बोधनमै हामी भन्छौं, ‘विवाह बन्धन ।’ यो जिम्मेवारीको वन्धन हो । यसलाई एकअर्काले गर्ने नियन्त्रणको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । आफुले आफैलाई थप जिम्मेवार भएको अनुभूत गर्नुपर्छ ।
जब विवाह गरिन्छ, तब जीवनको लय फरक गतिमा दौडन थाल्छ । जीवनको धुन फरक ध्वानीमा गुञ्जन थाल्छ । त्यसैले विवाह पछि र अघिको कुरा एकनास रहँदैन । तर, विवाह लगत्तै सबैकुरा फेरिन्छ भन्ने होइन । कतिपय कुराहरु क्रमिक रुपमा बद्लिदै जाने हो । एकअर्कालाई क्रमिक रुपमा बुझ्दै जाने हो । एकअर्काको भावना, चाहाना, इच्छा, आंकक्षा बुझेर विवाह लगत्तै आफुलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने छैन ।
विवाहपछि के होला ? : विवाह पछिको जीवन कस्तो होला भन्ने खुल्दुली सबैमा हुन्छ र उनीहरु विवाह अघि नै भविष्यका योजनाहरु बनाउन थाल्छन् । अझै विशेषगरि विवाहको तयारीमा भएका युवायुवतीहरुले त झनै विवाह पछिको जीवनको बारेमा धेरै सोच्ने गर्छन् । जिन्दगी सहज र सुन्दर होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । हामीमध्ये धेरैजसो मानिसले विवाह पछि जिन्दगीमा हुने परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्छौं । अहिले विवाहलाई लिएर मानिसहरुको विचार धेरै नकरात्मक छ । जब विवाह गर्ने कुरा आँउछ हामी सँधै अनुमान लगाउन थाल्छौं कि विवाहपछि सबैकुरा परिवर्तन हुन्छ । तर, यस्ता केही चीजहरु पनि छन् जसले तपाईंलाई सबैभन्दा कठिन समयमा पनि समस्याहरुसँग लड्न मद्दत गर्छ । यसैले विवाह गर्ने योजना बनाउँदा तपाईंले चिन्ता गर्नु पर्दैन । आउनुहोस् जानीराखौं विवाहपछि पनि तपाईंको के के कुरा पहिले जस्तै हुन्छः
तपाईंको व्यक्तित्व : विवाह गर्नाले तपाईंको व्यक्तित्वमा अचानक परिवर्तन आँउदैन । विवाहले तपाईंको गुण र स्वभावमा खासै परिवर्तन आँउदैन । विवाह गरेपछि पनि तपाईंको जीवनसाथी र तपाईं पहिले जस्तै रहनुहुन्छ । अचानक जीवन सुन्दर हुँदैन : यदि तपाईंले विवाह पछि जीन्दगी पूर्णरुपमा परिवर्तन हुन्छ र सबैकुरा सुन्दर हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । विवाहले मानिसको जीवनमा धेरै परिवर्तन त ल्याउँछ तर विवाह गर्नासाथै तुरुन्तै तपाईंको जिन्दगीको कठिनाइ हट्छ र जीवन सुखद हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
तपाईंको बानी : यदि विवाह पछि साथीहरुसँगको सम्बन्ध परिवर्तन हुन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्न सक्छ तर वास्तवमा यस्तो हुँदैन । साथै तपाईंको आमा र बुबा, अरु परिवारका सदस्यहरुसँग तपाईंको सम्बन्ध उस्तै रहन्छ जस्तो यो पहिले थियो । तपाईंको परिपक्वताको स्तर : धेरै मानिसहरुले विवाहपछि तपाईं धेरै परिपक्व हुनुहुन्छ भन्ने सोच्छन् तर, यो सत्य होइन । तपाईंको सोच्ने तरिकामा थोरै परिवर्तन आउन सक्छ तर यसको परिपक्वतासँग कुनै लेनदेन हुँदैन ।
जीवनको समस्याहरु : यदि तपाईंलाई विवाह चामत्कारिक चीज हो भन्ने लाग्छ र यसैले विवाह सबै समस्याहरु समाधान हुन्छ भने तपाईंले यसबारेमा फेरि सोच्नुपर्छ । तपाईंको जीवनका समस्याहरु जँहा थिए त्यँही रहन्छन् । विवाहपछि केवल अन्तर यति हुन्छ कि तपाईं पहिले अविवाहित हुनुहुन्थ्यो अहिले विवाहित हुनुहुन्छ ।
Previous यो हो ४ करोडको साइकल ! यस्तो छन् यसका बिशेषताहरु
Next आज मंगलबार घट्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ